Adeega Wadooyinka Puntland oo la Hormarinayo – Radio Daljir
Nofeembar 11, 2015 3:34 b 0
Somalia, November 11, 2015-(Daljir)_ Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si rasmi ah xariga uga jaray mashruuca daadejinta adeegga wadooyinka Puntland .
Ugu horeyn madaxweynuhu waxaa uu xariga kajaray aargo iyo dhisme masaajid oo Wasaaradda Howlaha guud iyo gaadiidka Puntland ku dhisatay Barnaamijka isku tashiga Puntland .
Intaas kadib ayaa Madaxweyne Gaas waxaa uu hoolka shirarka ee wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland ku daahfuray mashruuca daadejinta adeegga wadooyinka Puntland , oo ah mashruuc horumarineed laguna bilaabayo degmooyinka Garoowe iyo Qardho.
\_’\_’ Hadii aan lahelin wado fiican ama aan la dayactirin wadooyinkii hore wax horumr ah oo la gaarayo majirto, kaabayaasha dhaqaalaha aan sheegayana kama soo harto jid , \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale bogaadiyey daahfurka mashruucaan , waxaana uu sheegay inuu rajeynayo in degmooyinka kale ee Puntland laga fuliyo si adeegga bulshada si siman dalka u gaaro .
\_’\_’ Mahaariicdaan ay hay\_’aduhu fulinayaan waa wakhti kooban , marka waxaa larabaa inaynu qorshe sameysano , qorshahaasina waxaa uu noqonayaa inaynu isku tashano \_’\_’ Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweynuhu.
Gudoomiyaasha Degmooyinka Garoowe iyo Qardho ayaa madaxweynaha hortiisa ku saxiixay mashruucaan oo ay iska kaashanaayaan fulintiisa Dawladda Puntland iyo Barnaamijka JPLG .